INingizimu Afrika ingeyesihlano ngezibalo zabantu abanegciwane emhlabeni | Scrolla Izindaba
INingizimu Afrika ingeyesihlano ngezibalo zabantu abanegciwane emhlabeni
Cishe sekunamacala ayizi-356,000 aqoshiwe ngoMsombuluko kuphela, lokhu kubeka iNingizimu Afrika kwinombolo yesihlanu – ilandela i-Russia ngamacala okuthelelana ayizi-(777,400).
Amazwe athinteke kakhulu yileli-gciwane amathathu emhlabeni wonke iMelika ngamacala okuthelelana acishe abeyizigidi ezine, i-Brazil yona sebengaphezulu kwezigidi ezimbili kanye nase-India ngamacala okuthelelana angaphezulu kwesigidi esisodwa.
ENingizimu Afrika isibalo sabantu asebendele kobabomkhulu sesedlule ku-5,000. Isibalo sabantu abashonile ngenxa ye-Covid-19 sisephansi uma kuqhathaniswa namanye amazwe – kungenzeka ngoba abanye abantu asebendele kobabomkhulu abaqoshiwe ngokusemthethweni ababandakanyeka kuleli gciwane. INingizimu Afrika ngokusemthethweni inabantu abangama-85 abashone ngenxa ye-Covid-19 kwisigidi ngasinye, lokhu kufana nokwase-Russia. (E-Britain ingaphezulu kwesikhombisa ngabantu abangama-677. Emhlabeni wonke isibalo esiphezulu sabantu abandele kobabomkhulu sise-San Marino isifundazwe esizungezwe yi-Italy, ngabantu abayizi-1,238 isigidi ngasinye).